K-POP က တိုင်းပြည်ကို ဖျ က် စီးနိုင်တဲ့ က င် ဆာရောဂါ အကြီးစားလို့ နာမည်ပေးတံဆိပ်ကပ်ခဲ့တဲ့ကင်ဂျုံအမ် – Youth Bar
K-POP က တိုင်းပြည်ကို ဖျ က် စီးနိုင်တဲ့ က င် ဆာရောဂါ အကြီးစားလို့ နာမည်ပေးတံဆိပ်ကပ်ခဲ့တဲ့ကင်ဂျုံအမ်
မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျုံအမ်ဟာ ကမ္ဘာတလွှားမှာ ရေပန်းစားလူကြိုက်များနေတဲ့ K-Pop ဂီတကို ကြော က် စရာကောင်းတဲ့ က င် ဆာရောဂါလို့ တံဆိပ်ကပ်လိုက်ပါတယ်။အမျိုးသား ၇ ဦးအထိ ပါဝင်တဲ့ ကိုရီးယားကေပေါ့အဖွဲ့ BTS ရဲ့ အောင်မြင်မှုတွေ..
အများအပြားရရှိနေချိန်မှာပဲ ကင်ဂျုံအမ်က တိုင်းပြည်ကို ပျ က် စီးစေနိုင်တယ် လို့ မှတ််ချ က်ပြုလိုက် တာဖြစ်ပါတ ယ်။တေ ာင်ကိုရီးယား ဂီတ၊ ရုပ်ရှင် နဲ့ ဗီဒီယိုတွေ ဟာ တိုင်းပြည်ကို ပျ က် စီးစေနိုင်တယ်လို့ ကင်ဂျုံအမ်က ယုံကြည်နေကြောင်း New York Times က
ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာလည်း တောင်ကိုရီးယားနဲ့ အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု၊ ဂီတတွေကို တားမြ စ် ပိ တ်ပင်ထားပြီး တွေ့ရှိ ပါက ပြ င်း ထ န် တဲ့ ပြ စ် ဒ ဏ်ချမှတ်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ ပြောဆိုခဲ့ကာ ဆိုရှယ် လစ်စနစ်ဆန့် ကျင်ရေး ပျံ့နှံ့စေဖို့ ကြိုးစားနေကြောင်း ဆိုပါတယ်။.
ဂျပန်ဝက်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Aisa Press International ရဲ့ အယ်ဒီတာချုပ် Jiro Ishimaru က တက ယ်လို့ ဒါကို သူမထိ န်းချု ပ်ဘူး ဆိုရင် သူ့လူ တွေက တေ ာင်ကို မြောက်နေရာမှာ အစားထိုးဖို့ အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုလို့ စဉ်းစားလာမှာကို သူ ကြောက်နေပါတယ် လို့ ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။.
ပြီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင်ဘာလအတွင်းမှာ ကင်ဂျုံအမ်က တောင်ကိုရီးယားဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်တွေကို ကြည့်ရှုတာ ဒါမှမဟုတ် ပိုင်ဆိုင်ထားပါက ချွေးတပ်စခန်းတွေမှာ ငါးနှစ်ကြာနေရမယ်ဆိုတဲ့ ပြ စ် ဒ ဏ်ကို ၁၅ နှစ်အထိ တိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအာဏာရှင်.
ကင်ဂျုံအမ်ဟာ ၂၀၁၁ မှာ ဖခင်ဖြစ်သူ ကင်ဂျုံအီဆုံးပြိးနောက် နိုင်ငံကို ချုပ်ကိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားကတော့ ကမ် ဘာတလွှားမှ သူ တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်၊ဂီတတွေနဲ့ ထိုးဖောက်လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းကြီးမားနေပြီး K-Pop ကလည်း လူငယ်ပရိသတ်တွေကြားမှာ
အထူးနှစ်ခြိုက်အားပေးမှုရရှိခဲ့ကာ BTS အဖွဲ့ကတော့ ကြီးမားတဲ့အေ ာင်မြင် မှုတွေ ကို ရယူနိုင် ခဲ့ပါတယ်။ K-Pop ကြယ်ပွင့် တွေရဲ့ လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းကလည်း ကြီး မားကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပြီး သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားကလည်း မြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။
လူမှုကွန်ရက်တွေပေါ်မှာလည်း K-Pop အမာခံပရိသတ်တွေရဲ့ အဖွဲ့တွေ အများအပြားရှိနေပြီး သူတို့အားပေးတဲ့ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဖြစ် ခိုင်ခိုင်မာမာရပ်တည်နိုင်တဲ့အထိ အရှိန်မြင့်မားနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။